Niman xagjir ah oo lagu xukumay shan iyo toban sano oo xarig ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Niman xagjir ah oo lagu xukumay shan iyo toban sano oo xarig ah
La daabacay fredag 12 maj kl 14.33
Maxkamad giriig ah oo xukun ku riday labo nin oo iswiidhish ah.
Herdu zilam jî ji derdora Göteborg çûne. sawir: TT
Waddanka Giriiga ayaa labo nin oo Sweden ka tagey ku xukumay 15 sano oo xadhig ah, iyaga oo lagu eedeeyey denbiyo xagjirnimo la xidhiidha.
Labadan nin ayaa degennaa deegaanka Göteborg, lana qabtay bishii jeeniweri iyaga oo ka gudbaya xuduudka uu Giriigu la wadaago Turkiga. Nimankan ayaa alaabtooda laga dhex helay, midiyo, direyska militeriga iyo lacaggo kala duwan.
Booliska ayaa tuhunsan in nimankan ay ku socdeen wadanka Suuriya, halkaas oo ay ku biiri lahaayeen ururka IS. Maanta ayaa labadan nin maxkamad giriig ahi ku xukuntay 15 sano oo xadhiga ah, sababta ayaa ah in ay ka mid yihiin urur argagixiso. Qareenka u doodaya labadan nin, Athanasia Karagkiozaki ayaa u cadaysey raadiyaha Sweden xukunkan.
- Xukunku waa 15 sanadood oo xadhig ah, waanan ka dacwoon doonaa. Ma jirto wax cadaynaysa in ay ka mid yihiin urur argagixiso iyo in ay haysteen hub, ayey tidhi Karagkiozaki.
Labadan nin ayaa kala ah 28 iyo 19, mid ka mid ahi haysto dhalashada Sweden ah midka kalena haysto degennaanshaha waddankan Sweden. 28 jirka waxa hore loogu xukumay denbiyo la xidhiidha argagixiso, halka kan 19 ahi uu yahay qof aan denbi hore lagu xukumin.